အတိုင်းအတာ- ဘောက်စ်တစ်ခုအတွင်း ဒေတာသိုလှောင်မှု။ | Martech Zone
စကေး: တစ် box ထဲမှာဒေတာသိုလှောင်မှု!
အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 20, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒါကပျော့ပျောင်းတဲ့၊ အဆင့်မြင့်တဲ့၊ post နည်းနည်းလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမင်းနဲ့မျှဝေရမယ် ၏ရည်ရွယ်ချက်များတစ်ခုမှာ Martech Zone လူတွေကိုနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသာမကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွေကိုပါထောက်ပံ့ပေးနေတယ်။ ဒါကြောင့်နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားတဲ့ရေးသားချက်တွေကိုမကြာခဏတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ဤပို့စ်သည် Klingon ကဲ့သို့ စတင်ဖတ်ရှုပါက၊ သင်၏ CIO သို့သာ ပေးပို့ပါ။ သူ သဘောကျသွားမှာ သေချာပါတယ်။
ဒီနေ့နေ့လည်မှာ ဟောပြောပွဲတစ်ခုတက်ရတာ ပျော်တယ်။ စကေးတွက်ချက်ခြင်း။Doug Theis နှင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။ Lifeline ဒေတာစင်တာများ. 2st Century Fund မှ ဒေါ်လာ 21 သန်းရရှိခဲ့သည့်သတင်းကို မနှစ်ကဖတ်ခဲ့ရပြီးနောက် Scale Computing အကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါသည်။
Scale အောင်ပွဲရသောအခါတွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ငြီးတွားမှုများရှိခဲ့သည်... ဤမျှကြီးမားသော startups အများအပြားကို ပယ်ချခဲ့ပြီး အချို့သော စစ်မှန်သော stinker များသည် 21 fund gauntlet မှတဆင့် ၎င်းကို ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Scale သည် နည်းပညာပိုင်းအရပင် မဟုတ်ပေ။ in အင်ဒီယားနား… သူတို့ ဒီနေရာကို ပြောင်းရွှေ့နေကြတယ်။ ဒါသတင်းကောင်းပါပဲ – Scale သည် နည်းပါးသောအခွန်အခများ၊ ခိုင်မာသောနည်းပညာကဏ္ဍနှင့် Indiana ရှိ တတ်နိုင်သောလုပ်ခများမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိမည်မှာ သေချာပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းသည် Scale မှထုတ်လုပ်ထားသော မယုံနိုင်လောက်အောင် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ် 20 က၊ ကျွန်ုပ်သည် မလိုအပ်သောဆာဗာများနှင့် RAID ဒစ်ခ်ခင်းကျင်းမှုများဖြင့် OS2 ကွန်ရက်ကို စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ စနစ်အမြဲတမ်းရှိစေရန်အတွက်၊ ၎င်းသည် ဒရိုက်များကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်း၊ ဒရိုက်များကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အဆင်သင့်တွင် 'hot standby' ကိရိယာများထားရှိခြင်းတို့ကို နေ့စဉ် တပ်ရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာ အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုပါပဲ – ပြီးတော့ အမြဲတမ်း ပြဿနာဖြစ်တဲ့ ကျရှုံးမှုရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အချက်တွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်။
အသိဉာဏ်ပြွတ်သိုလှောင် Scale Computing မှ (ICS) သည် အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
Scale မှ Bryan Avdyli က "Storage ဟာ 'sexy' မဟုတ်တာကြာပြီ!" Scale Computing သည် ပျမ်းမျှဒေတာစင်တာရှိ အစိတ်အပိုင်းများစွာကို အစားထိုးနိုင်သော ဟာ့ဒ်ဝဲကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ စီမံခန့်ခွဲထားသော အစုလိုက်အပြုံလိုက်သည် တက်ကြွစွာ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ဆုံမှတ်များကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ကျရှုံးမှု၏ တစ်ခုတည်းသောအချက်ကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး စစ်မှန်သော အတိုင်းအတာဖြင့် စွမ်းဆောင်နိုင်သော သို့မဟုတ် universal access ကို ခွင့်မပြုပါ။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာပြီးနောက်၊ ဖွဲ့စည်းမှုအများစုသည် သခင်ကျွန်ဆက်ဆံရေးကို အသုံးပြုဆဲဖြစ်ပြီး တစ်ဦးတည်းပိုင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စီမံခန့်ခွဲထားသော သိုလှောင်မှု၏ စျေးနှုန်းကို မြင့်တက်စေသည်... နှင့် ၎င်းလိုအပ်သော ပျမ်းမျှကုမ္ပဏီသည် ကောင်းမွန်သော သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ကို မတတ်နိုင်ပါ။
Scale သည် အလွန်ရှုပ်ထွေးသော IBM နည်းပညာကိုယူကာ ယူနစ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်သို့ သေးငယ်သွားခဲ့သည်။ Scale သည် node တစ်ခုစီကို အသုံးပြု၍ရနိုင်သော အသိဉာဏ်ရှိသော အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် ယူနစ်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ အကယ်၍ node တစ်ခု သို့မဟုတ် drive တစ်ခု ပျက်ကွက်ပါက၊ အစပြုသူသည် အခြား node တစ်ခုဆီသို့ အလိုအလျောက် ညွှန်ကြားသည်။ Scalability သည် ရိုးရှင်းပြီး အကန့်အသတ်မရှိနီးပါးဖြစ်သည်။ SAN/NAS၊ လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်၊ ပါးလွှာသော နေရာပေးမှုစသည်ဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်၊ ကူးယူမှုတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ စနစ်သည် 2,200TB (နှင့် ထို့ထက်ပို၍) အတိုင်းအတာအထိ ချဲ့ထွင်နိုင်ပြီး ဒေသတွင်း သို့မဟုတ် အဝေးမှ ဒေတာသိုလှောင်မှုအတွက် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ iSCSI & VMWare iSCSI Multipathing ကို iSCSI၊ CIFS နှင့် NFS ပရိုတိုကောများအတွက် ပံ့ပိုးမှုဖြင့်လည်း တည်ဆောက်ထားသည်။
အင်္ဂလိပ်လို၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်ကုမ္ပဏီသည် 3TB ဖြေရှင်းချက်အား $12k အောက်နှင့် အခြေခံအားဖြင့် ၎င်းကို ပလပ်ထိုးပေးနိုင်သည်။ သင်၏လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ပြီး ဒေတာများကို ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည် - သင့်စွမ်းရည်ကို ချဲ့ထွင်နေချိန်တွင်ပင် စီမံခန့်ခွဲရေးအချိန်ကို 75% ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ စနစ်ကို ချဲ့ထွင်သောအခါတွင် သင်သည် နောက်ထပ်လိုင်စင်များ ထပ်ထည့်ရန် မလိုအပ်ပါ။
ဒေတာသိုလှောင်မှုလုပ်ငန်း၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အရွယ်အစားကို ကျိန်းသေပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် အလွန်ကောင်းမွန်သော နည်းပညာဖြစ်သည်။2ရန်ပုံငွေမှ ထောက်ပံ့ငွေ $21 million သည် ဤကုမ္ပဏီအတွက် ကြီးကျယ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ် ဝန်ခံရပါမည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောစိုးရိမ်မှုက ပိုကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုက သူတို့တွေ မကြာခင်မှာ သူတို့ဝယ်တော့မှာလား… သူတို့ ဒီနေရာကို ပြောင်းရွှေ့ပြီး စီးပွားရေးအရ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Tags: အမှတ်တံဆိပ်သစ္စာရှိမှုတိုက်ရိုက်ရောင်းချမှုစာဖတ်သူကိုအာရုံစူးစိုက်မှုလူမှုမီဒီယာ crmဆိုရှယ်မီဒီယာဖြည့်ညှင်းလူမှုမီဒီယာအချိန်ဇယားဆွဲလူမှုမီဒီယာစုစည်း
1 သင်ဘတ်ဂျက်ရှိပါက XNUMX ကိုနှိပ်ပါ
21:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 3, 50
ဟေး ဒေါက်ဂလပ်စ်၊ ဂီတ၊ အချိုရည်၊ wi-fi + nerd-speak အတွက် မင်းငါ့ကို ပူးပေါင်းမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
Bloggers Anonymous တွင် ယခု ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 22 ရက်၊ Indianapolis အနုပညာပြတိုက်တွင် ညနေ5နာရီမှ7နာရီအထိ။
RSVP လုပ်ပြီး နောက်ထပ်အချက်အလက်ကို ဤနေရာတွင် ရယူပါ- http://www.facebook.com/event.php?eid=15997455071...